ရှမ်း/ မြောက် KIA, တပ်ရင်း (၈)နှင့် (၃၈) ဒေသတွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ် | democracy for burma
ရှမ်း/ မြောက် KIA, တပ်ရင်း (၈)နှင့် (၃၈) ဒေသတွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်
tags: Banglum Bum, Burma, Fighting, Kachin State, KIA, Myanmar
ရှမ်းပြည်နယ်ေ မြာက်ပိုင်း KIA, တပ်မဟာ (၄) လက်အောက် ခံ, KIA, တပ်ရင်း (၃၈)ဒေသအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ကျူးကျော် လှုပ်ရှားနေ သော မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် (ခ.မ.ရ-၅၆၇) တပ် နှင့် KIA, တပ်ရင်း (၃၈) လက်အောက်ခံ ဒေသခံ KIA, ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့တို့ (၁၆.၁၂.၂၀၁၃) ရက်နေ့ ညနေ (၂း၃၀) အချိန် Banglum Bum အနီးတွင် ရင်စိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ထို့ အအပြင် KIA,တပ်ရင်း (၈) ဒေသ နမ့်လဒ်ဘွမ် ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင် ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာသော မြန်မာ အစိုးရစစ်တပ် (ခ.မ.ရ-၅၀၅)တပ် နှင့် KIA, တပ်ရင်း(၈)တပ်ဖွဲ့ တို့ အကြား (၁၆.၁၂.၂၀၁၃) ရက်နေ့ ညနေ (၄)နာရီ အချိန် ခန့် တွင် ပန်လုံရွာအနီး တွင် ထိပ်တိုက်ရင်စိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ် ပွားေ ကြာင်း သိရှိရပါသည်။
Dingda Ginwang Ginjaw rai nga ai, KIA Masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (38) ginra, hta shamu shamawt nga ai, Myen Asuya Hpyen Dap Hk.M.Y Masat (567) na hpyen hpung hte KIA Masat (38) Dap Dung ginra na, Mungshawa Hpyen Hpung (MHH) ni, December (16) ya shana maga hkying (2:30)pm aten daram hta Banglum Bum kaw ang ka-tut gasat poi byin ai lam na chye lu ai.
Matut nna Dung (8) ginra, Namlek Bum kaw nna, yu wa ai Hk.M.Y Masat (505) Dap na hpyen hpung hte KIA Masat (8) Dap Dung na hpyen hpung ni, dai na de hkying (4:00)pm aten hta Prang tawng mare hte Bang lung la-pran kaw ang ka-tut gasat poi byin ai lam na chye lu ai.
← MYANMAR BURMA :MOI မိတ္ထီလာအင်းဝဘဏ်ကို စစ်တပ်မှ ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး အနုကြမ်းစီးလုယက်
DSI summons 17 PDRC anti-government protest leaders to acknowledge insurrection charges; freezes bank accounts of 18 persons including Suthep →